सौन्दर्य तथा फेसन Archives - Aamsanchar
सौन्दर्य तथा फेसन
मोडल रोमी कृष्ण अबतारमा
प्रशिद्ध मोडल, कोरियोग्राफर, जुम्बा नृत्य प्रशिक्षक रोमी खड्गीले कृष्ण जन्मोउसवलाई उल्लाहासमय बनाउन भगवान कृष्णको रुप धारण गरेर फोटोशूट गराएकी छन् । उनले आज काठमाडौंमा आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रममा नृत्य गर्नकोलागि कृष्णको प्रतिक बनकी हुन् ।
यस्ता घरेलु तरिका अपनाएर चायाबाट छुट्कारा पाउनुहोस्, कपाल हुन्छ चमकदार र मजबुत
गर्मी महिनामा कपालको विशेष ख्याल राख्नु निकै जरुरी हुन्छ । यो मौसममा कपालमा धेरै समस्या देखिन्छ । तर केही त्यस्ता साधारण उपायहरु छन्, जसले कपाललाई चमकदार र मजबुत बनाउन अनि कपाल झर्ने र चायाको समस्याबाट […]
शुक्रवार, जेठ २१, २०७८
होसियार रहनुहोस् अनुहारमा कागतीको रसले यस्ता समस्या आउनसक्छ
केही मानिसहरु अनुहारको ह्वाइटहेड्स र सनस्पट्सदेखि चाउरी हटाउन र गोरो बन्नका लागि अनुहारमा सिधै कागतीको रस लगाउँछन् । तर छालाको लागि यो हानिकारक हुनसक्छ । कागतीको रस सिधै छालामा लगाउँदा पोल्न सक्छ । विशेषगरी जसको […]
आइतवार, वैशाख १२, २०७८
जिन्स किन्दा बिचार पुर्याउनुहोस् यस्ता कुरामा
जिन्स सबैभन्दा पहिले अमेरिकी मजदुरले प्रयोग गरेका थिए। बलियो र टिकाउ हुने भएकाले यो छोटो समयमै निकै लोकप्रिय भयो। विस्तारै यसलाई आरामदायक पहिरन र फेसनका रूपमा प्रयोग गरिन थालियो र आज आएर जिन्स फेसनको अपरिहार्य […]
शनिवार, चैत १४, २०७७
टोनर स्किन सफा गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले अनुहारको मृत छाला हटाउँदछ र स्किनलाई नरम बनाउँदछ । दैनिक टोनर प्रयोग गर्नुहोस्। यसले छालाको अधिक तेल सुकाउन मद्दत गर्दछ। खैर, धेरै प्रकारका टोनरहरू बजारमा उपलब्ध छन्। तर […]
मङ्गलवार, चैत ३, २०७७
जाडोयाममा विवाह बन्धनमा बाँधिदै हुनुहुन्छ ? यी हुन् अनुहारमा चमक ल्याउने ५ घरेलु उपाय
के यो जाडोयाममा तपाईं पनि विवाह बन्धनमा बाँधिदै हुनुहुन्छ ? यदि हो भने आफ्नो अनुहारमा ग्लो ल्याउनका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुहोस् । आजकाल ब्यूटीपार्लरमा विवाह अघि नै फेयरनेस ट्रीटमेन्ट सुरु हुने गर्छ । घरेलु […]
मङ्गलवार, मंसिर १६, २०७७
खाली पेटमा यी ४ रामबाँण उपाय अप्नाउनुस्, हुनेछ अत्याधिक तौल पनि कम
एजेन्सी – तौल कम गर्नु सजिलो छैन । तर शरीरमा अनावश्यक मासु लाग्नबाट बच्न भने सही खाना र नियमित व्यायाम गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । तर, केही आयुर्वेदिक सुपर फुडले तीव्र गतिमा तौल कम गर्न […]
भान्सामा पाइने यी ५ चीज, जस्ले हटाउँछ डन्डिफोरको दाग
एजेन्सी – अनुहारमा आउने डन्डिफोरको दागले धेरैलाई सताएको हुन्छ । यस्ता दागहरु लामो समयसम्म अनुहारमा रहिरहने भएकाले धेरै चिन्तित हुन्छन् । कतिपयले यस्तो दाग हटाउनका लागि विभिन्न औषधिको प्रयोग पनि गर्ने गर्छन् । तर यस्तो […]
शुक्रवार, मंसिर ५, २०७७
यी ५ घरेलु उपाय, चाँयाबाट छुटकारा
एजेन्सी – प्रायः व्यक्तिमा चाँयाको समस्या हुन्छ । यसको उपचार गर्नका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउने गरिन्छ । कुनै पनि उपायको वास्तविक कारण नजानी गरिने उपचारले कपाल झनै विगार्ने गर्छ । चाँयाको मुख्य लक्षण कपाल झर्ने […]
आलस लगाएर छालालाई बनाउनुहोस् गोरो र चम्किलो, यसरी बनाउनुहोस्
आलसको गुणः आलसमा एन्टीफंगल, एन्टीअक्सिडेन्ट, एन्टिडायबिटिक, एन्टिथ्रोम्बिक, एन्टिहाइपरटेन्सिव र एन्टिट्युमरजस्ता गुण हुन्छ । त्यसैले यसलाई आयुर्वेदमा उत्तम औषधी मानिन्छ । छालालाई क्षती हुनबाट जोगाउँछः घामका कारण छालामा हुने क्षती र सन ट्यानबाट आलसले सुरक्षा […]